အိမ်တွင်ကြောင်တစ်ကောင်လက်ခံရရှိရန်အတွက်အခြေခံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | Bezzia
မာရီယာ vazquez | | ချစ်. ကစား
ကြောင်တစ်ကောင်ကိုမွေးစားဖို့စဉ်းစားနေသလား။ သင်အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသင်၌အလိုရှိမည့်အရာနှင့်မလိုအပ်သောမေးခွန်းများရှိဖူးပါသလား။ အကယ်၍ သင်ကယင်းကိုလက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါကအကာအကွယ်ပေးသူသည်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်သင်အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါလိုက်နာရမည့်အဆင့်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မမှန်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။
မိသားစု ၀ င်အသစ်မ ၀ င်ခင်မှာအရူးလုပ်လေ့ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့်သင့်ဘ ၀ ကိုတိရိစ္ဆာန်နှင့်မမျှဝေခဲ့လျှင်၎င်းသည်၎င်းသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုသောအရာများကိုလိုအပ်သည်ဟုထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်အလွန်နည်းပါးသည် ကြောင်များအတွက်အခြေခံဆက်စပ်ပစ္စည်း သငျသညျစစ်ဆေးရန်အချိန်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်။
ကြောင်တစ်ကောင်အိမ်သို့ပြန်လာသည့်အခါအရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာသူသည်စိတ်အေးအေးထားရန်၊ သူခိုလှုံနိုင်သည့်အခန်းတစ်ခန်းကိုယုံကြည်စိတ်ချလာသည်အထိသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာဖွေရန်သူဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အောက်ပါဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ကျွန်မရဲ့ကြောင်တွေအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့ပထမလေးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာဗီရိုထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသိုထားခဲ့တဲ့ကြွေဖလားတွေကိုသုံးခဲ့တယ်။ သင့်မှာအဲဒီလိုတစ်ခုခုရှိရင်၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊ သင်ဟာ feeder ကိုဝယ်ဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာကြောင်တွေအတွက်အခြေခံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့ပါ။ ကျနော့်အကြံဥာဏ်ကတော့သင်ကကြွေထည်တစ်ခုပေါ်တွင်လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းရှိဖလားများသည်အလွန်ကြာရှည်ခံသည်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်။ လုံလောက်သောအလေးချိန်ရှိသည် လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆူညံသံကိုရှောင်ပါ ကြောင်ကိုစားသောအခါ။ သို့သော်သင်သည်ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သံမဏိပြုလုပ်ရန်ရာဘာအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုအတွက်သွားနိုင်သည်။ သူတို့ဟာပိုမိုပေါ့ပါးပြီးစျေးသက်သာတယ်
ကြောင်များရှိရမည် သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအမြဲတမ်းရေချိုဒါဆိုမင်းလည်းသောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သီးခြား ၀ ယ်ယူခြင်းသည်နှစ်ဆပေးသည့်အရာတွင်လောင်းခြင်းနှင့်ယင်းကိုလမ်းခွဲသူနှင့်သောက်သူအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ သူတို့အတူတကွနီးစပ်လျှင်ကြောင်သည်စားသောအခါရေသည်ညစ်ပတ်ပေလိမ့်မည်။ အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အိမ်မှအဝေးသို့ထွက်ခွာမည့်အချိန်ကိုသတိပြုရမည်။ သင်၌ကြောင်သည်ရေမကုန်တော့မည်ကိုသင်သံသယရှိပါကသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ပါက Hopper သောက်သူသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာကြောင် သူတို့အပြင်ဘက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး အဆိုပါခြစ်တစ် ဦး ရှောင်လို့မရတဲ့ဒြပ်စင်ဖြစ်လာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်သည်အထိသေချာသည်အထိမည်သည့်ကြောင်မျှမထားသင့်ပါ။
တစ် ဦး ကခြစ်ရာ post ကိုကြောင်များအတွက်သုခချမ်းသာပေးသည်။ သူတို့ကဒီတစ်ခုပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လက်သည်းကိုထက်မြက်နိုင်ပါလိမ့်မည်မသာသူတို့လည်းနိုင်ပါလိမ့်မည် အနားယူရန်သို့မဟုတ်ကစားရန်၎င်းကိုအသုံးပြုပါ။ အကယ်၍ သင်ကပြတင်းပေါက်ဘေးတွင်ထားရှိသောမြင့်မားသောမြင့်မားသောတစ်ခုတည်းကိုသင်အလောင်းအစားပြုလျှင်မိသားစုအမြင်သစ်ကိုမိသားစုဝင်များကပေးမည်ဆိုပါကသင်သည်ဖျော်ဖြေမှုနှစ်ဆရရှိလိမ့်မည်။
ဒီဇိုင်နာအိပ်ရာပေါ်တွင်ကံကြမ္မာကိုမဖြုန်းပါနှင့်! ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့မတားမြစ်ပါ၊ သို့သော်သင့်ကြောင်ကကြိုက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ အိမ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအလွန်ပျော့ပျောင်းသောစောင်သည်သူတို့အတွက်အလွန်အိပ်ရာဝင်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ ပျော့ပျောင်းသောမျက်နှာပြင် နွေးထွေးသောနေရာသည်သူတို့၏ထာဝရခဏတာမှေးမှိန်မှုကိုအဆင်ပြေစေရန်လိုအပ်သည်။
ကြောင်ဘယ်လောက်သန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာမင်းကြားဖူးမှာပါ။ တစ်နေ့နာရီပေါင်းများစွာမိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့မွေးဖွားချိန်မှ စ၍ အမှိုက်သရိုက်များမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသူတို့သိကြသည်။ တည်ရှိ ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ထားနှစ် ဦး စလုံး sandboxes ။ သင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အထက်ပိုင်းကိုဖယ်ရှားပြီးကြောင်ကိုခြိမ်းခြောက်။ မခံစားရစေရန်အမှိုက်သရိုက်များကိုသတိနှင့်ဆိတ်ငြိမ်သောနေရာတွင်ထားပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ကလမ်းခွဲအနီးကဘယ်တော့မှမသငျ့သညျ။
ဖိနပ်တစ်လုံးသည်သူတို့အတွက်အဖိုးတန်ကစားစရာဖြစ်လာပြီးသူတို့အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းရန်ကူညီပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကများစွာသောထဲကတစ်ခုအဘို့ဤအစားထိုးနိုင်ပါတယ် အမွေးအတောင်နှင့်ပြည့်စုံ၏ နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်၊ အခြားအောင်မြင်သောနှင့်စျေးသိပ်မကြီးသောကစားစရာများမှာ furry toy ကြွက်များနှင့်စမ်းပေါက်များဖြစ်ပြီးသင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ကစားရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်ခွေးတစ်ကောင်မွေးစားလျှင်သင်စိတ်ဝင်စားသည် အဆိုပါဖြီးဖို့အသုံးပြုရ။ ဆံပင်အသေကောင်များကိုဖယ်ရှားပေးသည့်အပြင်ဆံပင်ညှပ်ဘောလုံးများဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပေးသည့်အပြင်ကြောင်များစွာသည်နူးညံ့ချောမွေ့သည်။ အထူးသဖြင့်အချိန်ဖြုန်းနေစဉ်သင်နှင့်သင့်ကြောင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ဤပစ္စည်းကိရိယာကိုအိမ်တွင်ရှိခြင်းကိုသဘောကျမည်။
ဤရွေ့ကားသူတို့အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသူတို့ကိုသင်ပေးရပါလိမ့်မယ်ကြောင်များအတွက်အခြေခံဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ပထမတော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ် အလုံးစုံတို့ကိုတခန်းတည်းထဲမှာထားရမည်; သူတို့ကသင့်ကိုယုံကြည်မှုမရမချင်းသူတို့ပိတ်ထားနိုင်ပြီးလုံခြုံမှုရှိနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ယုံကြည်မှုရရှိပြီးသည်နှင့်စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်လောင်းကြေးများကိုဖွင့်ထားနိုင်သည် အခြားအိမ်သူအိမ်သားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ အိမ်ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုသောအခါသင်၏အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးသူတို့အတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနေရာတစ်ခုရှာနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ချစ်. ကစား » အိမ်တွင်ကြောင်တစ်ကောင်လက်ခံရရှိရန်အခြေခံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
El Cid ၏ရာသီ ၂ သည် Amazon Prime သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်